May 2016 - Page 3 of 3 - Xalayaa
Haadha Koon Yaade!
Duraan dursee siihaa ga'uu nagaan koo kan onnerra madde. Harmee koo, jaalatamtu fi kabajamtu Akkam naa jirta? Anii mucaan kee nagaa siif qaba. Atii waan hundumaa kooti. Deesse koo, fayyaa keeti? Egaa haalli jireenyya sirra nafageesse jira. Deesse koo, fayyaa ta'uun kee anaaf jireenyya kooti. Ayyoo...
Obbo. Jawar Mohammed akka hin danda'amne Abay Tsehayeetti agarsiise Ji'a afuriin dura shira mootummaan Itoophiyaa xaxameen televishiini OMN qilleensarra ugguramee ture. Odeefannoo wayiitawaa Oromiyaa fi biyoota adunyaa waliin akka hin dhaqabsiisne yaalamus ummatni Oromoo Fincila Xumura Garbummaa(FXG)...
FAAYIDAA AFOOLA OROMOO Beekan Gulummaatiin Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta’u. Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu jechuudha. Kanaafuu faayidaalee afoolaa kanneen...
Daa’ima Keenya Maqaa Moggaasu Dadhabne. Maqaa Nuuf Moggaasa!
01 May 2016 Kan maxxanse Naa'ol
Maqaa Nuuf Moggaasaa!! Toora sab-himaa (Social Media) kanneen akka Facebook, Whatsapp, Viber irratti suura daa’ima reefu dhalate kan maxxanfamu arguu keessan hin oolu. Namootni baayye suura daa’ima wajjiin barruu gabaaba jalattii barreesani maxxansu argina. Kunis...”Maqaa naaf Moggaasa” jecha...